आगामी चुनाव ट्रम्पलाई जिताउन चाहन्छ चीन
२०७६ कार्तिक २९ शुक्रबार ०८:५५:००
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आफूमाथिको चेतावनीका बाबजुद चिनियाँ अधिकारी इमानदार भएर आगामी निर्वाचनमा उनी विजयी भएको हेर्न चाहन्छन्
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी वर्ष हुने निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने योजनामा छन् । अमेरिकी इतिहासका सर्वाधिक विवादास्पद र विभाजनकारी राष्ट्रपतिमध्ये एक उनी सम्भावित महाभियोग सामना गर्दै चुनावी परीक्षामा अघि बढ्नेछन् ।
उनको जनाधारका विषयमा पनि धेरै चर्चा हुन्छ । धेरैले यस्तो अनुमान लगाएका थिए कि उनका वास्तविक समर्थक उत्तरी अमेरिकाका कम आय भएका र थोरै शिक्षित गोरा पुरुष कामदार छन् । तर, सन् २०१६ को आमनिर्वाचनको नतिजाले यसलाई गलत साबित गरिदियो । उनले मध्यम वर्गीय, उच्च आय भएका भोटर र महिलाको पनि मत पाए । यसबाहेक ट्रम्पलाई कसको समर्थन छ ? चीन भन्ने सुन्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला ।
गलत लागे पनि यो अनौठो लाग्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनप्रति अति कठोर हुने पहिलो अमेरिकी नेताको छवि बनाएका छन् । यी त्यस्ता राष्ट्रपति हुन्, जसले ताइवानका राष्ट्रपतिको फोन उठाए । जसले चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु गरे, नतिजा अहिले विश्वव्यापी अर्थथतन्त्रमा गम्भीर धक्का परेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ टेक कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी ५ जी (पाँचौँ जेनेरेसन) नेटवर्कबाट प्रतिबन्ध लगाए र चिनियाँ सरकारका अधिकारीमाथि भिसामा कडाइ गरे । त्यसो भए किन चीन ट्रम्पलाई सन् २०२० को चुनाव जिताउन चाहन्छ ? यो यसकारण कि ट्रम्पका नीति र अभिव्यक्ति चीनलाई आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सहयोगी सिद्ध छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले वासिंटनको विश्वव्यापी विश्वसनीयतालाई बेवास्ता गरेको छ, उत्तर एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नेटो) र वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनलाई पनि । उसले यी संस्थालाई बेवास्ता गरेर प्रतिस्पर्धी चीनसहित अन्य देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विवादको समाधान खोज्नका लागि समान रूपमा खुला अनुमति दिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले वासिंटनको विश्वव्यापी विश्वसनीयतालाई बेवास्ता गरेर प्रतिस्पर्धी चीनसहित अन्य देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विवादको समाधान खोज्न समान रूपमा खुला अनुमति दिएको छ
उसले आफ्ना प्रमुख सहयोगीलाई पनि चिढ्याएको छ । जस्तो, सिरियामा अमेरिकाका कुर्दिस सहयोगीलाई लत्याएर ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना सबै सहयोगीलाई यो सन्देश दिएको छ कि वासिंटनलाई विश्वास गर्न सकिँदैन । यदि खलपात्र होइन भने पनि ह्वाइटहाउस प्रमुख व्यापारिक सम्झौतामा फरक पक्कै भएको छ, जस्तो ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप ।
ट्रम्प त्यस्ता सम्झौता च्यात्न व्यस्त छन्, जसले अमेरिकालाई विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यता बेइजिङले क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीलाई अघि बढाइरहेको छ । यो चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र एसोसियसन अफ साउथइस्ट एसियन नेसनका १० सदस्यलाई जोड्ने पृथ्वीकै ठूलो व्यापार ब्लक हो ।
यी सबै फ्याक्टरले चीनलाई त्यस्तो अवसर दिन्छ, जुन उसले विश्वव्यापी प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि कहिल्यै पाएको थिएन । त्यसैले यो तर्कसंगत ढंगले अनुमान लगाउन सकिन्छ, अमेरिकी राष्ट्रपतिको आफूमाथिको चेतावनीका बाबजुद चिनियाँ अधिकारीहरू इमानदार भएर आगामी निर्वाचनमा उनी विजयी भएको हेर्न चाहन्छन् ।
(निगेल ग्रिन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय परामर्शदाता संस्था डी भेरी ग्रुपका संस्थापक सिइओ हुन्)एसिया टाइम्स डट कमबाट